I-Bath iyisici senkolo empilweni yethu. Futhi ku-bathhouse into ebaluleke kakhulu yisitofu. Kuncike ekutheni usheshe uphuze futhi uphole indawo yokufudumala yomoya. Uma uthatha isinqumo sokwenza izitofu ezishisayo zokugeza ngamandla akho, khona-ke kufanele kucatshangelwe ukuthi lolu daba luyinkimbinkimbi, oludinga iziqu ezithile.
Isithando somlilo (design yayo) ngokuyinhloko sincike ekutheni uhlobo kanye nokuhluka kwebhuku ngokwalo. Kodwa namuhla sizokhuluma ngokukhethekile egumbini le-steam yaseRussia, okuyinto evamile kakhulu. Ukungena kuwo, umuntu ulahla ukugula ngokomzimba nangokomzwelo. Ngeke sisho ukucwaninga kwekhilomitha kwezikhanyiso zezokwelapha ezihloniphekile kulesi sihloko, esiye sabonisa ngokuphindaphindiwe ukusetshenziswa kokugeza kanye nendima yayo ekugcineni impilo yabantu.
Esigumbini se-steam yaseRussia, itshe, futhi ngemva kwalokho izitini, izinkuni zezinkuni zokugeza zihlale zisetshenzisiwe. Bafudumala kancane kancane, kodwa futhi bangasheshi ukupholisa phansi. Noma kunjalo, kunzima kakhulu. Iqiniso liwukuthi ukubeka kahle akufanele ube namakhono akhethekile kuphela, kodwa futhi usebenzise isitini esikhethekile esithakazelisayo. Ngaphezu kwalokho, kufanele unakekele ukwakhiwa kwesisekelo nesimiso esiphakeme esisezingeni eliphezulu. Ukuvinjelwa kwamanzi kufanele kwenziwe kakhulu, ngokucophelela.
Ngalokhu, umugqa wokugcina wabekwa ngophahla lokuzwa, ezinye izitini zibekiwe kuwo, emva kwalokho - uhlaka lwesibili lwempahla yokuphahla, kuphela emva kwalokhu, ukuqhubeka nokubeka phambili. Beka kufanele kube kuhle ngangokunokwenzeka, ukubeka ivolumu yangaphakathi ngezitini ezikhanyelayo, ukuze isitofu sokushisa sokhuni singabi khona.
Kuyinto evamile yokungaqondi kahle ukuthi izitsha zensimbi zingasetshenziswa ukugeza, kodwa akunjalo. Insimbi ishesha ukuphuza, okwenza igumbi lingenakulinganiswa. Ukuze ugweme lokhu, abanye bagubha izindonga ngamatshe noma ngesitini esifanayo.
Ngeshwa, lesi silinganiso sisiza kancane, futhi ukushisa kuvela "kumanzi". Ukuze kungenzeki, kubalulekile ukushisa izikhuni zezinkuni ze-sauna kuphela ngesitini esingenasibindi somlilo. Kuyadingeka (!) Ukushiya igebe phakathi kwezitini nensimbi, ubukhulu obufanele okungenani bube ngu-15 cm. Sicela uqaphele ukuthi ubukhulu bendawo yokugcoba akufanele kudlulele ubukhulu bezitini ngokwayo.
Ngendlela, kulula ukwenza isithando somlilo ngokwakho. Ngokuyinhloko, kunezinhlelo eziningi ezitholakalayo ekusebenziseni ngisho nomakhi ongenalwazi. Manje sizobheka indlela izinkuni zenziwe ngayo ngokugeza okuvela kwelinye ipayipi elikhulu.
Iphayiphu inqunywa zibe izingxenye ezimbili. Eyokuqala (encane) isetshenziselwa ukwakhiwa kwesithando somlilo, i-ashtray ne-grate. Esikhathini esithandweni somlilo ngokwawo, kufanele kutholakale i-latit, ne-lattice enesisindo yensimbi ekhanyelayo. Izobamba ithangi lamanzi elenziwe ngepayipi yesibili yombhobho. Kumele kuqashelwe ukuthi ngaphansi kwalo yenza umgodi we- chimney, okuzoqhubeka nokushisa amanzi, ukugcina uphethiloli. Igebe eliphakathi kwepayipi kanye ne-tank lifakwe kahle.
Ngaphezu kwalokho, iphepheni ifakwe emdongeni wetanki lamanzi. Ngendlela, ingafakwa ebhokisini lomlilo, besebenzisa lokhu ngenhloso imigqa emibili yezitini ezikhanyelayo - ngakho amanzi azoshiswa ngokulinganayo. Qinisekisa ukuhlobisa ikhoneni lapho kukhona isitofu, amathayili noma foil. Lesi silinganiso sizokuvikela engozini yomlilo. Uma udinga isitofu esivuthayo se-Finnish sokugeza, kuzodingeka uphendukele ochwepheshe: kunzima kakhulu ukukukhiqiza ngokwakho.
"Isiteshi se-metro" se-Seliger sizophuma ngokushesha
Usayizi nobukhulu be-floorboards
Ukubalwa kwe-Thermotechnical. Kungani kudingwa ngumnikazi wendlu encane
Isihlabathi esikhulu. Isicelo
Snowmobiling Stels: ukubuyekezwa. "Stealth 600 Viking": ukubuyekezwa kanye nokugijima
I walithanda kakhulu nabadumile actress Italy
Umdwebi American Mark Ryden - isebenza Country
Indlela gcoba eqhweni plastic: amathiphu namasu
Yini engingayenza ekhaya ngesikhathi sokunakekela izingane?
Kuyini "ukwazi"? Meaning, bomcondvofana kanye ukuhumusha